Toamasina : notolarana sakafo ny voafonja | NewsMada
Toamasina : notolarana sakafo ny voafonja
Tsy diso anjara amin’ny fiatrehana ny fetim-pirenena ny olona sahirana sy ny voafonja. Nandray andraikitra mafonja tamin’ izany ireo fikambanam-behivavy vadin’ny olona ambony sy mpitondra ary vehivavy ambony anivon’ny fiadidian’ny prefektioran’ i Toamasina. Nitarika ny hetsika ny vadin’ny prefektioran’ i Toamasina sy ny faritra Atsinanana ary ireo vadin’ny manam-boninahitra eo amin’ny Foloalindahy sy sivily hafa.
Vary 20 kitapo amin’ny 50 kg, paty, savony ary menaka no natolotra ny fonja ho an’ ireo voafonja rehetra lahy sy vavy mba ihinanan’ izy ireo sakafo sahaza sy ara-pahasalamana ao anatin’ny fety. Nahazo harendrina kosa ireo fokontany 148 eto an-tampon-tanànan’ i Toamasina ho an’ny ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana ara-pivelomana.
Nandeha manokana kosa fa tsy anisan’ ireo voalaza tetsy ambony ny vadin’ny ben’ny Tanànan’ i Toamasina, nanolotra fitaovana ho an’ ireo tsena, araka ny fifaninanana nampanaoviny nantsoina hoe « Tsena madio » ny tenany. Nahazo voalohany tamin ‘izany ny tsenan’i Valpinson amin’ny tsena sivy eto an-dRenivohitr’ i Toamasina.